Alaabooyinkayaga ugu muhiimsan waa daboolka kursiga gaariga, barkimada kursiga gaariga, daboolka isteerinka gaariga, gogosha sagxada, iwm. Hadafkayagu waa inaan siino dhammaan macaamiisheena alaab deegaan u wanaagsan, raaxo iyo badbaado leh.
Qalabka: Dharka Polyester-ka, midabka: heerka madow: nambar cusub: 9
1. Badbaadada: Barkinta shilku waxay ku habboon yihiin labada dhinac ee kuraasta hore.
2. dhadhan la'aan: waxaanu dooranaa alaabta deegaanka u fiican si aan u soo saarno daboolka fadhiga oo aan lahayn ur gaar ah;
3. Naqshad sibeedka: Waxaanu ku isticmaalnaa siib daboolka kursiga dambe, kaas oo u kala qaybin kara daboolka kursiga dambe 40/60 50/50 60/40.
4. Qurux badan: Tolmada polyester-ka ee midabada kala duwan waxay bedeli kartaa gudaha gaarigaaga dhowr ilbiriqsi gudahood;
5. Agabka dhabarka oo dhan ee difaaca ayaa si buuxda u daboolaya intiisa dambe ee kursiga.
6. Mashiinka dharka si fudud loo nadiifin karo iyo qalajinta hawada.
7. Si fudud loo rakibo, adiga oo aan kala furfurin kursiga gaadhigaaga iyo kursiga danbe. Daboolka fadhiga wuxuu qabtaa fiilo go'an iyo xadhig laastikada ah, taas oo ka dhigaysa rakibidda mid ku habboon.
Alaabooyinku waxay ku habboon yihiin daboolida kursiga matoorada guud. Ku habboon inta badan kuraasta dambe ee hoose ee baabuurta, xamuulka, SUV-yada iyo baabuurta yaryar. Kursiga madaxa ee la rari karo ayaa ku habboon barkinta shilka. Haddii aadan hubin in shaygani kugu habboon yahay iyo in kale, fadlan noo sheeg sannadka, soo saaraha iyo nooca gaadhigaaga, waxaanan heli doona shayga aad u baahan tahay. Macluumaad muhiim ah oo ay ugu wacan tahay kala duwanaanshaha shaashadda bandhigga iyo iftiinka, waxaa laga yaabaa in midab yar uu ka leexdo. Tolmada dhinaca daboolka fadhigu waxay la jaan qaadaysaa barkinta shilka. Tan waxa lagu tolaa dun gaar ah, markaa si adag ha u jiidin inta lagu jiro rakibidda, taas oo keeni karta dildilaac. Caadi ahaan, waxaa jira qabsatooyin ku yaal kursiga madaxa. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto alaabta, fadlan nala soo xiriir marka hore.
Tilmaamaha & Faahfaahinta
Cabbirka guud, wuxuu ku haboonaan karaa inta badan kuraasta baaldiga hoose ee kursiga gaariga,
Kursiga hore ee baabuurka wuxuu daboolayaa barkin shil
Kursiga dambe wuxuu u qaybsan karaa 40/60 50/50 60/40
Rakibaadda fudud ee aad u fudud, looma baahna in la burburiyo kuraasta gaadhigaaga
Alaabaha deegaanka ku habboon, nadiif fudud
Hore: Gaadhiga Cudbiga Barafka ee PEVA Gaashaanka barafka ee hore ee muraayada hore ee cudbi
Xiga: Warshadaynta Tayada Sare ee Qorraxda
Gaadhiga Cheyi Tayada Sare leh
Baabuurka Electrostatic Film Side Block